Profiled (आकारको पाना) - पहिलो-वर्ग नालीदार पाना धातु, को corrugation एक उच्च यांत्रिक बल प्रदान wherein। उहाँले काठ, ईटा र ढुङ्गा को गरे बाड प्रतिस्थापन। निर्माता उहाँलाई यी सामाग्री एक गम्भीर प्रतियोगी गरेका छन्। आज तपाईं खरिद गर्न सक्नुहुन्छ संग नालीदार बोर्ड पत्थर, काठ र ईटा द्वारा ढाँचा।
नालीदार बोर्ड को प्रयोग
यसलाई विभिन्न उद्योगहरूमा आज Profiled लागू हुन्छ। यो धेरै लाभ छ। ढुङ्गा अन्तर्गत Profiled यो दोस्रो निर्माण बजार मा सबै भन्दा ठूलो छ, धेरै लोकप्रिय छ। मुख्यतया जमिन एक बाधा र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रूपमा प्रयोग। उहाँले पत्थर र ईटा स्तम्भ संग Blends। यो बार हुनत अलिकति, र प्राकृतिक एक रोचक र सुन्दर दृश्य छ। बाड स्थापना Profiled पाना बनेको सजिलो र एक पत्थर भवन निर्माण भन्दा छिटो हुन्छ। यस्तो सामाग्री काठ, ब्रश र अग्लो भू-भाग ठाडो ढलान भइरहेको हुन सक्छ जो रिमोट ठाउँहरू, मा उपकरण नउठाई पनि स्थापित गर्न सकिन्छ। साथै, एक पत्थर अलंकार अन्तर्गत व्यापक छत र अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को मोहरा समाप्त निर्माण को। उहाँलाई संग काम गर्न, विशेषज्ञहरु पानाहरू काटन लागि Grinder प्रयोग गर्नुहोस्, र कट ओफ सीट भन्दा बढी रंग। को बार स्थापना गर्न अर्को कुदाल, एक मोबाइल वेल्डिंग मिसिन र बलियो कुशल हात आवश्यक छ। एक दूरी देखि एक पत्थर द्वारा Profiled धेरै प्राकृतिक सामाग्री जस्तो देखिन्छ। यो पनि कोटिंग को inhomogeneous स्थान वर्णन र मात्र देखिने नजिकै सतह समतल छ कि देखेको छ। यो व्यावहारिक रेखाचित्र को दृश्य प्रभाव अफसेट फोटो द्वारा सम्भव भएको थियो।
कसरी बार लागि एउटा ढुङ्गा अन्तर्गत Profiled छ?
सुन्दर वस्तुहरू, वास्तविक पत्थर बार को पहिलो तस्वीर निर्माण गर्न (जो राम्ररी हेर्न ट्याबहरू र छाया बताउँछन्
पत्थर)। त्यसपछि, पानामा धातु मा प्रोफाइल तहहरू एक द्वारा एक लागू छन्। पहिलो क्रोम। त्यसपछि, basecoat यो लागू हुन्छ, जो कोटिंग छ-चित्र, र त्यसपछि पारदर्शी सुरक्षा तह पछि। को multilayer संरचना patterned जंग उत्पादन गर्न स्थायित्व र प्रतिरोध बढ्छ।
एक रक अन्तर्गत Profiled: मूल्य
Profiled बार भन्दा कम लागत लागि छ पत्थर को बार सामाग्री चयन गर्दा तत्संबंधी थप लाभ भन्छन् जो वा काठ। पनि यसको दीर्घायु मा एक प्लस र ठोस सतह, जो मार्फत घेरेदार आंगन क्षेत्र सुरक्षित अपरिचित, हावा, सडक जनावर र घुसपैठियों को प्रवेश आँखा लुकेका गरिनेछ। तपाईं पनि छोराछोरीलाई वा पाल्तु जनावर आफ्नो साइट को बाहिर प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई को पक्का हुन सक्छौं। एक नालीदार बोर्ड को स्थापना पछि बार कुनै पनि अतिरिक्त लागत आवश्यकता छैन। उदाहरणका लागि, उहाँले पानी, घाम, आगो, कीरा र क्षय हुनु गर्न जोखिम डराएका छैन आवधिक टिन्टिङ आवश्यकता छैन। यस्तै उत्पादनहरु को लागत नालीदार बोर्ड को प्राकृतिक पत्थर बनेको एक बार को मूल्य भन्दा कम धेरै पटक गरे। र कारण यसको कम वजन गर्न भौतिक परिवहन लागत कम गर्छ।
Bimetallic radiators: समीक्षा, मापदण्डहरू विशेषताहरु,
जग लागि सुदृढीकरण कसरी बुनना गर्न
हीरा काटन आज: छिटो, सस्तो र धूलो मुक्त
संग घर मर्मत पर्खाल plasterboard कसरी पंक्तिबद्ध?
एक अर्ध-पृथक घर कसरी बनाउने? अर्द्ध-पृथक घरहरू मानक परियोजनाहरू
के राम्रो अलार्म
Slonovskii OPG (संगठित आपराधिक समूह): वर्णन, संरचना, र रोचक तथ्य
त्यहाँ गर्भावस्था को समयमा खण्डका चिह्न लागि एक आदर्श उपाय छ?
शुरुआती लागि चलिरहेको अघि अप न्यानो
ओवन मा पाठो व्यञ्जन
सस्ता एन्ड्रोइड स्मार्टफोन कसरी चयन गर्न
विरोधी भडकाऊ र analgesic लागूपदार्थ
सही विकल्प कसरी बनाउने: गृह लागि शक्ति स्टेशन